FAA'IIDO U AH BISADAHA: TILMAAMAHA BURBURINTA BOODADA - GURI, GURI
Faa'idada (Faa'idada) - Tani waa badeecadda xakamaynta xayawaanka xoolaha ee ay soo saartey Bayer HealthCare AG. Inta lagu jiro jiritaanka, daroogada waxaa qiimeynay dhakhaatiir badan oo khibrad iyo khibrad leh.
Wakiilka cayayaanka ayaa si weyn u ilaaliya xayawaanka guriga ka ilaaliya dulinka dhiigga nuugista, taas oo ah, marka loo eego, waxay yihiin sidayaal cudurada faafa ee badan.
Xiniinyaha, injirta iyo dadka kale ee wax cunaya waxay keenaan raaxo darro oo kaliya xayawaanka raba, laakiin sidoo kale milkiilayaashooda. Sidaa daraadeed, inaad dooratid daawo lagula dagaalamo cayayaanka noocan oo kale ah waa inay si gaar ah u taxaddaraan
Advantagege wuxuu ka kooban yahay qaybta firfircoon ee firfircoon. Waa 10% Imidacloprid. Xalka waxaa loo isticmaalaa ujeedada ah ka hortagga horudhaca iyo daaweynta cayayaanka ee boogaha. Muuqaalka muuqaalka bukaan-socodka waa calaamad u ah isticmaalka daroogada.
In muuqaalka, waa dareere huruud ah oo leh yar, urta gaarka ah. Waxaa laga helaa xal mugga 0.4 ama 0.8 milimitir. Dhibcaha waxaa lagu shubaa dhuunta polyetylen. Pipettes ayaa lagu duubaa boogaha, badanaa 4 kasta.
Celceliska qiimaha hal pipet ee Russia waa 160 roon iyo wax ka badan. Sidaa darteed Baakidhka ayaa ku kici doona 650 roon. Waxaad ka iibsan kartaa daawada adigoo adeegsanaya macaamiisha internetka qiimo jaban. Saamaynta ugu wacan ee xalinta walxaha firfircoon waxay siinaysaa isaga oo leh taabasho iyo saameyn nidaam, oo si xun u saameynaya dhammaan marxaladaha horumarinta cayayaanka.
Alaabtaasi waxay leedahay dhadhan qadhaadh. Sidaa daraadeed, haddii xayawaanku uu ku shaqeeyo meel cusub, waxaa laga yaabaa inuu keeno dharka.
Kama dambaysta maaha calaamad muujinaysa suuxdinta. Kala-bixinta uma baahna daaweyn waxayna ku dhaaftaa dhowr daqiiqadood.
Advantagege wuxuu leeyahay tayooyin badan oo wanaagsan, taas oo ay uga mahadcelineyso heeshiis badan oo ra'yi-celin ah. Waa kuwan qaar ka mid ah:
Daawadan waxaa loo qaybiyaa maqaarka iyada oo aan lagu dhex gelin dhiigga.. Taasoo tayo leh, Advantagege waxaa loo isticmaalaa daaweynta ilamaha yar, haweenka uurka leh, bisadaha kalkaalinta, daaweynta dadka daciifka ah ama jirran. Aad ayay u badbaado tahay caafimaadka aadanaha.
Dhimashada bukaan-socodka ayaa dhacaya 12 saacadood.ka dib isticmaalka daroogada.
Dhibcuhu waxay leeyihiin macneheedu. Taasi waa, dareeraha wuxuu burburin karaa dirxiga cayayaanka ee ah meesha ay bisadu ku nool yihiin. Tani waxay si toos ah u dhacdaa inta lagu jiro taabashada timaha xayawaanka lagu daweeyo jirka jirka.
Natiijadu waa mid cad: Dhamaan dadka boodhka ah ayaa la burburiyay iyadoon wax daawo dheeraad ah lahayn.
Qalabka difaaca ee dareeruhu wuxuu joogayaa bil gudaheed. Duufaan qaangaar ah ayaa dhimata ka dib markay qaniinto, taas oo ah, ka dib markii si toos ah loola xiriiro maqaarka xayawaanka.
Dhibaatooyinka waa kuwo aan biyuhu ahayn. Kama cabsanayaan dhoobada, roobka ama roobabka kale. Sidaa daraadeed, ka dib markaad daaweyso dhogorta iyo maqaarka xayawaanka, waxaad ku maydhin kartaa adiga oo aan walwal lahayn in waxtarka dhibcaha hoos u dhigi doono, oo u sii daa inay lugeeyaan.
Marka la samaynayo dumarka kalkaalisada, xalku wuxuu ka ilaalin doonaa cayayaanka dhiiga-nuugida ee ma aha oo keliya, laakiin sidoo kale gabadha yaryar.. Hadalka kiiskan ayaa ah waxa loogu yeero raadinta dalladda.
Ka hor intaadan isticmaalin qalabka, waa inaad akhridaa tilmaamaha. Marka loo eego sharaxaadda daroogada, waa in la codsadaa bil kasta.
Digniin! Qiyaasta qiyaasta waxaa lagu xisaabiyaa miisaanka xoolaha. Miis ka yar 4 kilo oo miisaankiisu u baahan yahay qiyaasta 0.4 ml. In ka badan 4 kg - siday u kala horreeyaan, 0.8 ml.
Ka hor inta aan la shaqeynin difaaca difaaca waa in laga saaraa dhuumaha.
Waxaa lagu xiray dhinaca kale, ka dibna waxaa lagu xayiraa xuub yar oo khafiif ah. Kadibna marinka ayaa dib loo saaraa.
Xayawaanka waxaa lagu dhejiyaa meel taagan, markaa xajisto dhogorta ayaa si tartiib ah uga baxday, maqaarka maqaarka, dhibcaha ayaa la isku ururiyaa marka la cadaadiyo tubada.
Feylku waa inuu ku yaallaa meelaha ay dawadu ku haboontahay xayawaanka. Maadada suuxinta looma baahna.
Maqaarku waa inuu noqdaa mid cireed. Waa inaan aheyn boogo iyo abrasions.
Daweyn kala badh ka dib daaweynta, cayayaanku wuu dhimanayaa. Sida caadiga ah hal daawo ayaa ku filan.
Hase yeeshe, haddii loo baahdo in la mariyo habka marin-u-dejinta mar kale, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo dhibcaha ujeedka ujeeddadeeda aan ka badnayn hal mar bishii.
Sida waafaqsan hal baako oo daawo ah ayaa ku filan 4 biloodsi aad uga takhalustid xayawaankaaga dulin.
Caqabadda ugu weyni waxay noqon kartaa idiosyncrasy ee daroogada, taasi waa, u adkaysiga.
Dhibaatooyinka soo raaca waa cuncunka maqaarka iyo casaankooda.. Haddii fal-celinta xasaasiyadeed ee noocan oo kale ah ay dhacdo, ha raadsanin daaweyn kale. Gaduudan iyo cuncunku waxay u gudbi doonaan si wakhti gaaban ah.
Faa'idada laguma talin karo caruurta.haddii aanay 10 toddobaad jirin.
Advantagege lagu keydiyay meel qallalan oo qoyan, baako daboolan, waa lagama maarmaanka u ah alaabta. Dhibaatooyinka waa in laga ilaaliyaa carruurta. Nolosha sheyga - 4 sano.
Marka xayawaanka lagu shaqeynayo ma cuni kartid, sigaar cabista ama in la cabbo. Nidaamka ayaa la fuliyaa dibedda kaliya.
Haddii aysan suurtagal ahayn - qolka hawo ku jirta. Marka nidaamka la dhammeeyo, gacmaha si fiican ugu maydhin biyo leh isticmaalka qasabka ah ee saabuun.
Haddii daroogada ay shaqadu ku hesho maqaarka gacmaha, waxaa la dhaqayaa biyo badan oo biyo ah. Ma boodi kartid ama nadiifin kartid bisadka ilaa hal maalin ka dib markii maqaarkeeda lagu daaweeyo daawo. Laguma talineynin inaad u ogolaato xayawaankaaga caruurta yar yar iyo in ay la xiriiraan isaga.
Haddii laba koofiye u maraan daaweynta markasta, waxay u fiicantahay in ay kala soocaan qolal kala duwan si aysan u lumin karin midba midka kale marka la isticmaalo dhibcaha.
Waa muhiim! Tuubbooyinka tuubbada dhaadheer ayaa si adag loo mamnuucay in dib loogu isticmaalo ujeedooyin guri. Waxaa lagu tuuraa weel qashin ah, oo lagama maarmaan u ah bacaha balaastigga ah. Waxaa lagu tuuraa qashinka kale ee guriga.
Faa'idadu waxay leedahay qiimo macquul ah waxayna si wax ku ool ah uga badbaadineysaa bisadaha ka yimaada cayayaanka dhiigga qaada. Fududeynta isticmaalka daroogadaas iyo natiijooyinkeeda waxay ka dhigtay dawo caan ah, ma aha oo kaliya kuwa leh kuwa caanka ah, laakiin sidoo kale eyda. Si kastaba ha noqotee, ka hor inta aan la isticmaalin daawada ma noqon doonto mid aad u macquul ah si ay ula tashato xoolaha oo ku saabsan isticmaalka.